Vaovao - Laser manohitra ny hosoka amin'ny teknolojia ho an'ny sarontava
Hatramin'ny nipoahan'ny COVID-19, ny sarontava dia nanjary filàna isan'andro ho an'ny olona tsirairay. Saingy, ny elanelana misy eo amin'ny fangatahana dia nahatonga ireo mpivarotra tsy ara-dalàna sasany nanararaotra an'io, ary sarontava saron-tava ambany kalitao marobe no niditra an-tsena. Ny teny mifandraika amin'ny "sarontava sandoka" sy "hosoka sarontava" dia nipoitra matetika tamin'ny fikarohana mafana. Ny saron-tava hosoka dia tsy vitan'ny hoe miaro azy fotsiny, fa mety iharan'ny fandotoana koa noho ny tontolon'ny famokarana tsy manara-penitra, izay manimba ny fahasalaman'ny tena manokana. Ny fomba mivantana indrindra ahafantarana ireo sarontava dia ny fanamarihana ireo marika fanoherana ny fanaovana hosoka amin'ny laser.
Ho an'ny sarontava misy andian-tsarimihetsika 3M, N95 / KN95, dia azo fantarina amin'ny marika fanoherana ny fanaovana hosoka amin'ny boaty saron-tava. Ny marika ny tena saron-tava dia hanova ny loko amin'ny zoro isan-karazany, raha ny marika amin'ny sarontava sarontava kosa dia tsy hiova loko. Ho an'ny saron-tava fonosina marobe, ny fahasamihafana dia azo avahana amin'ny fandinihana ireo teny amin'ny sarontava. Ny tena sarontava sarontava 3M dia voamariky ny laser misy tsipika diagonal, fa ny sandoka kosa dia natonta amin'ny ranomainty misy teboka (mariky ny ranomainty tsy mitovy).
Raha ny marina, ny teknolojia manamarika ny fanoherana ny fanaovana hosoka amin'ny laser dia tsy azo ampiasaina hamantarana ny maha-marina ny saron-tava, fa koa mitana andraikitra lehibe amin'ny sehatry ny sakafo, fanafody, paraky, hatsarana ary vokatra elektronika. Azo lazaina fa ny haitao manamarika ny teknolojia fanoherana ny fanaovana sandoka dia nampidirina tamin'ny lafiny rehetra amin'ny fiainantsika.
Amin'ny maha karazana haitao marika marika laser vaovao azy dia tena marina ny vokatry ny marika amin'ny milina manamarika fibre laser. Ny tsipika fanamarihana dia mety hahatratra ny haavon'ny milimetatra na micron, izay tena manahirana ny maka tahaka sy manova ireo marika. Ho an'ireo faritra misy endrika kely sy sarotra ireo dia afaka mamita mora foana ny asa marika ny milina fanamarihana laser. Tsy ny vokany ihany no tena tsara tarehy, fa tsy hifandray mivantana amin'ilay zavatra izy, ary tsy hanimba ilay zavatra.
Ireo marika dia maharitra ary tsy ho manjavozavo rehefa mandeha ny fotoana, ka ny marika dia manana ny asan'ny anti-fanaovana hosoka. Saingy misy ny mety fisandohana. Noho izany, raha dinihina ny toetran'ny masinina laser mifehy amin'ny alàlan'ny solosaina, ny laser BOLN dia nanamboatra ny rafitra fanamarihana laser ary nifangaro tamin'ny rafitry ny data corporation. Aorian'ny fampidirana ny asan'ny tahiry amin'ny rindrambaiko marika, ny mpanjifa dia afaka manamarina ny kaody ary manavaka ny maha-azo itokiana ny vokatra. Ny tahirin-kevitra manohitra ny fisandohana dia mety ho kaody, kaody bar, DM na kaody QR. Mandritra izany fotoana izany, ny fitaovana dia manana mpamaky barcode, izay afaka mamantatra haingana ny atin'ny kaody sy manamarina ny naoty kaody, manatsara ny fotoana famokarana ary mitazona ny vokatra ho an'ny fitadiavana sy ny fanoherana.